Rasaasa News – Ashahaado la Dirirkii oo Ashuun Galay
on April 14, 2009 10:34 pm
Waxaa baryahan dambe ay bulshada Somaliyeed gaar ahaana bulshada Somalida Ogadeeniya ay dagaal cad ku hayeen kooxda guul darada halganka Somalida Ogadeeniya. Kooxdan oo kolkii hore ka tirsanayd Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya ayaa waxay in badan halganka biyo u mukhuursanaayeen oo ay shacabku fahmi la,aayeen. Waxaa lagu ogaa in ay la dagaalamaan gumaysiga si looga xoreeyo dhulka Somalida Ogadeeniya, waxayna isu tusi jireen in ay yihiin dad halganka daacad u ah. Waxayna taageero dhaqaale iyo mid niyadeedba ka heli jireen shacabka Somalida Ogadeeniya gudo iyo dibadba. Waxay in badan iyaga oo aan la fahmayin ku tamash layn jireen xeebaha wadamada Afrika qaarkood, waxay maal galin ku samaysteen shirkadaha xawaalada ee Somalida.
Waxay dil iyo dhac u gaysan jireen dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee gudaha ku jira, waxayna si aann la fahmaynin u dili jireen wax garadka beelaha Somalida Ogadeeniya iyaga oo ugu yeedhaya waxay la shaqeeyaan gumaysiga. Waxaa kale oo ay layn jireen qof alaale qofkii caqli leh ee yidhaahda war sax ma aha waxn aad samaysnayaan.
Waxaa xad dhaaf noqotay cabashadii ka soo baxaysay dadweynaha Somalida Ogadeeniya waxaan filayaa in dad badani ay ideecadaha ka dhagaysteen Jwxo-shiil oo ku baanaya in uu dilay hal maalin 7 oday dhaqameed oo reer wardheer iyo 11 Oday dhaqameed oo reer Qalaafe ah, kolkii Ieddcada BBC-da laga waydiiyeyna waxaa uu yidhi waxay la shaqaynayeen gumaysiga. Su,aal u baahan in la isweydiiyo ayaa waxay tahay hadaad dadka layn yaad u dagaalamaysaa! sida uu sheegayo magaca Jabhadu waxaa weeye Jabahda Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya, Jabhadan waxaa leh dadka hadii ay doonaan halganka way wadi hadii ay u arkaan in ayna dan ugu jirin way joojin. Waxaa kale oo ay shacabku dooran ruuxa ay is leeyihiin wanaag ayuu halganka u keeni karaa oo shacabka danihiisa ayuu wadaa. Laakiin khasab baan kugu xukumi oo aan kugu xoreyn kaaf iyo kala dheeri xukuumada xun baa la ridaa saa waaba Madax Jabhadeed oo xun shacab waa ka adag yahay.
Dhibaatooyinkaas oo dhan kolkii ay ku dhacayeen shacabka gudha waxaa iyana ay dhibaatadan mid la egi haysatay Qurbo joogta Somalida Ogadeeniya kuwaas oo lacagaha ay qaxootinimada kaga helaan reer galbeedka jeclaystay in ay dalkooda ku xoreeyaan kolkii ay su,aal waydiiyaan kooxda Jwxo-shiilna jawaabta la siiyaa ay noqotay hebel waa dabo qoodhi oo gumaysiga ayuu la socdaa. Muddo badan ayaa waxaa aamusnaa shacabka Somalida Ogadeeniya ee gudo iyo dibadba, markan jwxo-shiil waxaa uu isu arkay in uu cidwalba ka adag yahay cidii ka soo horjeedsatan uu dili.
Xitaa waxay gaadhay kooxda-shawxoshiil in ay jaajuusnimo ka bilowdo maamulka Kilalka, heer dadka ay ogg yihiin in ay xeeshooda ogaadeen ay yidhaahdaan hebel waa qaaraan bixiye iyo iyaga oo Telefoono iyo warqado u dira si ruuxaas loo dilo ama loo xidho. Ilaahay waa xaq ma duudsiye Jwxo-shiil, JXSG galbeed oo halgan ku jirta ayaa waxay soo gashay gudaha Somalida Ogadeeniya waxaan dagaal ku qaaday kooda Jwxo-shiil oo dilay N/hurayaal qaali. Arintaasi kolkii ay dhacday ayey shacabku isweydiiyeen qaaciidada caanka ah [ cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibkaa], hadii ay kooxda jwxo-shiiladu dagaal kula jireen Itobiya maxay u dilayaan dadka colka la,ah Itobiya.
Waxaa midaas ka sii darayd kolkii ay damceen in ay Koonfurta Somaliya ka sameeyaan ficilo dagaal Oognimo iyaga ooo dhibaato u gaystay shacabka Somalida ah ee Degan koonfurta Somaliya. Dadba wada yaab [cajab], waxaana loo bixiyey Kooxda Ashahaado la dirirka ee Ina Cumar Cismaan, dhinaca Somalida Ogadeeniyana waxaa looga yaqaan Jwxo-shiilo, dhinca dalalka reer galbeedkana waxaa looga yaqaan Jaajuusiin.
Waxaa xigtay in ay hadh cad dilaan N/hurayaal halganka qaali u aha oo ka tirsanaa Jabhada Wadniga Xoreynta Ogadeeniya kuwaas oo ay maydkooda siiyeen gumaysigu ku faano in uu dilay oo uu jabiyey JWXO madaama uu madaxdeedii laayey. Arintan kolkii ay dhacday ayaa hal mar ayaa dareenkii shacabku Jihada kale isu badalay, waxay noqotay arin markhaati ma doon ah waxaana ku baryey waa.
Shacabka Somalida Ogadeeniya waxay halmar ku foodhyeen bahaladii ku naaxay qaaraanka laga uruuriyey qurbo joogta qaxootinimada ku jooga dalalka reer galbeedka ee islahaa u qada halganka dalkiina.
Qaaraankii ay shacabku bixinayeen waxay u joojiyeen kaliya in kooxda Jwxo-shiiladu ayna ahayn kuwo daacad ka ah halganka, balse ay ujeedadoodu tahay kaliya in ay qaybiyaan bulshada iyana ka ganacsadaan shilimada qaaraanka.
Kolkii ay taasi dhamaatay waxay shacabku bilaabeen in ay ka soo mantajiyaan wixii ay cuneen kuna ciqaabaan gafkii ay ummada ka galeen. Hadaba sida ay wararku sheegayaan waxay ka caageen goobihii kulanka, waxayna bilaabeen in ay habeenkii shiriyaan haweenka iyo lafaha hoose ee ay ka soo jeedaan. Mid ka mid ah dambiilayaalka dumiyey halganka oo hore u ahaan jiray taliyaha booliska kilalka ayaa waxaa la sheegay in uu ku dhuumaalaysto dal ka mid ah dalalka yurub isaga oo abaabulay arimo qabiil isaga oo aan kaligii socon karin ayaa waxaa waardiyeeya saddex nin oo ka soo jeeda jinfadiisa.
Waxaanu kol dhaw soo qori doonaa falalka uu ku jiro iyo meesha uu wax marinayo iyo waliba magacyada waariyeyaalkiisa.
Ruux kasta oo dambi ka gala halganka Somalida Ogadeeniya taariikhda ayaa xukumi doonta, shacabka Somalida Ogadeeniyana way ka aar gudan kol ay noqotaba.